बिहीबार जन्मिने व्यक्तिको भाग्य कस्तो ? प्रेम विवाह की मागी बिवाह ? जान्नुहोस् « गोर्खाली खबर डटकम
बिहीबार जन्मिने व्यक्तिको भाग्य कस्तो ? प्रेम विवाह की मागी बिवाह ? जान्नुहोस्
ज्योतिष शास्त्रमा जन्मबार अनुसार पनि मानिसको भाग्यमा असर गर्ने बताइन्छ । जन्म समय अनुसार नै मानिसको भूत, वर्तमान र भविष्यका बारेमा फलादेश गरिन्छ । आज विहीबार, विहीबार जन्मेका मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ ? यसबारे धेरैलाइ जिज्ञासा हुनसक्छ । हामिले यसबारे केही जानकारी तयार गरेका छाै